छोरो मान्छे भएर रून्छन्? :: Setopati
सुरज सुवेदी असोज २६
एक दिन साँझपख केही मान्छेले एउटा स्ट्रेचर हाम्रो घरअगाडि बिसाए। त्यहाँ एक जना महिला सुतेकी थिइन्।
उनलाई बेथा लाग्न थालिसकेको थियो। आमाले भन्नुभयो, 'डेलिभरी यहीँ गराउनुपर्छ।'
सोचेँ, 'म पनि त्यसरी नै त जन्मिएँ होला। म पनि त्यसरी नै त रोएँ होला।'
बच्ची रोएपछि मात्र उनी छोरी भएको देखिएजस्तै म रोएपछि मात्र म छोरा भएको पत्तो लाग्यो होला। वा, मैले रोएको आवाज मात्र सुनेर 'छोरा' वा 'छोरी' छुट्याउन नसक्नेलाई छोरा हुँ भनेर चिनाउन आफ्नो शरीर देखाएँ होला।
बरू म हुर्किएर ठूलो हुँदै जाँदा पटकपटक कसैले मेरो कान नजिकै आएर आएर मलाई भनिरह्यो, 'तिमी त छोरो मान्छे पो त। छोरो मान्छे रूनु हुँदैन।'
मेरो कान नजिकै आएको मान्छेले आफ्नो वरपर धेरै मान्छे भएको सान देखाउँदै थप्यो, 'छोरो मान्छे भएर यस्तो कमजोर भएको अरूले देखे भने के भन्छन्?'
निक्कै ठूलो हुन्जेल पनि मनमा प्रश्न आइरह्यो, 'के रूनु साँच्चै कमजोरी हो त?'
त्यस बेला रोएकै कारण कसैले 'कमजोर' भन्थेनन्। आफू भएर बाँच्दा कसैले कमजोर नभनिदिनु कत्रो ठूलो स्वतन्त्रता हो!
अब्राहम लिंकनले आफ्नो छोराको स्कुलमा 'उसलाई कहिलेकाहीँ आँखाबाट आँसु झार्न लाजमर्दो कुरा होइन भनिदिनुस्' भन्दै लेखेको चिठी झुटो भयो।
'जन्मिँदा रूँदै आएको...' म पहिला पहिला आफ्नो आँसुलाई 'डिफेन्ड' गर्न खोज्थेँ।
'रून्चे' भनेर जिस्काउनेलाई 'रेडिमेड' जवाफ दिन्थेँ, 'मेरो दाहिने आँखाभित्र कोठी छ। आमाले भन्नुभएको आँखामा कोठी हुने मान्छे धेरै रून्छ।'
जब भिडले 'त्यसो भए त नांगै जन्मिएको मान्छे, सार्वजनिक स्थानमा नांगै हिँड्नुपर्दो' भनेर जवाफ दिन थाल्यो, मैले त्यो तर्कसँग जोरी खोजिनँ।
नबुझेको संस्कृतको मन्त्र दोहोर्‍याए जसरी पटकपटक दोहोर्‍याएँ, 'छोरो मान्छे भएर रून हुँदैन।'
अब बाहिर निस्किएपछि रोएर मैले जीवित भएको प्रमाण दिनुपर्छ र भन्नुपर्छ, 'म छोरो मान्छे हुँ। म रून्छु।'